လက်နက်မပါဖို့ သဘောတူပြီး တစ်ဖက်က ဓါးချသော်လည်း အလစ်သုတ်ဓါးခုတ်တဲ့သူ… – ရှအေလငျး
လက်နက်မပါဖို့ သဘောတူပြီး တစ်ဖက်က ဓါးချသော်လည်း အလစ်သုတ်ဓါးခုတ်တဲ့သူ…
ကတိသစ္စာ” တည်သောခါ ဝယ် ဩဇာလေးနက် ပေါ်ဆီတက်၍ နွယ်မြက်သစ်ပင် ဆေးဘက်ဝင်၏ ဆိုတဲ့ စကားလေးကို ကြားဖူးကြမှာပါ..
ဒါဟာ မျိုးရိုးအစဉ်အဆက်ကြားခဲ့ဖူးကြတဲ့ စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုးအရင်တုန်းကဆိုရင်. ဥစ္စာစောင့်တွေက လူသားတွေကို ရွှေတွေ ၊ ငွေတွေ လက်ဝတ်ရတနာတွေကို ငှားပေးကြတယ်တဲ့..
နောက်ပိုင်း လူတွေက ကတိသစ္စာမတည်တော့ပဲ ပြန်မပေးတော့တာကြောင့် နောက်ပိုင်း မငှားတော့ဘူးဆိုတဲ့ တဆင့်စကား ပုံပြင်လေးကို လည်း ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်..
အခုတင်ပြမယ့် သတင်းရုပ်သံဖိုင်လေးကတော့ ယောက်ျားချင်း ရန်ဖြစ်ရာကနေ တုတ်တပြတ် ဓားတပြတ် ဖြစ်ကြတဲ့ အထိပါပဲ။
ဒါဟာ လုံးဝကို မကောင်းတဲ့ အပြုအမူမို့ အတုမယူကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ စကားလေးပြန်ဆက်ရရင်..
ဒီလို စကားများကြတဲ့အခါ.. လက်ထဲက ဓားတွေ တုတ်တွေ ချပြီး လက်ဗလာနဲ့ ချမလား လို့ တဖက်က စိန်ခေါ်တဲ့ ပုံပါပဲ..
ဒီအချိန်မှာ တဖက်က ဓားတွေ တုတ်တွေ ချလဲချရေ.. တစ်ဖက်က ဓားကိုင်တဲ့ ကောင်လေးက ကတိ မတည်တော့ပဲ ဝင်ခုတ်ပြေးပါတော့တယ်..
ဒါကို အများက အတဲ့သူခံလို့ ပြောကြပါတယ်။
ယောက်ျားချင်းယုံကြည်မှုက သူ့ကို အ စေတာလား ။ ကတိမတည်တဲ့သူက လူတော် ဖြစ်တာလားဆိုတာ
ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ ဘယ်လိုများ မြင်မိပါသလဲ ခင်ဗျာ..
Video- ထူးထူးခြားခြား video များ
ကတိသစ်စာ” တညျသောခါ ဝယျ ဩဇာလေးနကျ ပျေါဆီတကျ၍ နှယျမွကျသဈပငျ ဆေးဘကျဝငျ၏ ဆိုတဲ့ စကားလေးကို ကွားဖူးကွမှာပါ..
ဒါဟာ မြိုးရိုးအစဉျအဆကျကွားခဲ့ဖူးကွတဲ့ စကားလေးဖွဈပါတယျ။ ဟိုးအရငျတုနျးကဆိုရငျ. ဥစ်စာစောငျ့တှကေ လူသားတှကေို ရှတှေေ ၊ ငှတှေေ လကျဝတျရတနာတှကေို ငှားပေးကွတယျတဲ့..
နောကျပိုငျး လူတှကေ ကတိသစ်စာမတညျတော့ပဲ ပွနျမပေးတော့တာကွောငျ့ နောကျပိုငျး မငှားတော့ဘူးဆိုတဲ့ တဆငျ့စကား ပုံပွငျလေးကို လညျး ကွားဖူးကွမယျထငျပါတယျ..
အခုတငျပွမယျ့ သတငျးရုပျသံဖိုငျလေးကတော့ ယောကျြားခငျြး ရနျဖွဈရာကနေ တုတျတပွတျ ဓားတပွတျ ဖွဈကွတဲ့ အထိပါပဲ။
ဒါဟာ လုံးဝကို မကောငျးတဲ့ အပွုအမူမို့ အတုမယူကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုပါတယျ။ စကားလေးပွနျဆကျရရငျ..
ဒီလို စကားမြားကွတဲ့အခါ.. လကျထဲက ဓားတှေ တုတျတှေ ခပြွီး လကျဗလာနဲ့ ခမြလား လို့ တဖကျက စိနျချေါတဲ့ ပုံပါပဲ..
ဒီအခြိနျမှာ တဖကျက ဓားတှေ တုတျတှေ ခလြဲခရြေ.. တဈဖကျက ဓားကိုငျတဲ့ ကောငျလေးက ကတိ မတညျတော့ပဲ ဝငျခုတျပွေးပါတော့တယျ..
ဒါကို အမြားက အတဲ့သူခံလို့ ပွောကွပါတယျ။
ယောကျြားခငျြးယုံကွညျမှုက သူ့ကို အ စတောလား ။ ကတိမတညျတဲ့သူက လူတျော ဖွဈတာလားဆိုတာ
ပရိသတျကွီးအနနေဲ့ ဘယျလိုမြား မွငျမိပါသလဲ ခငျဗြာ..
Video- ထူးထူးခွားခွား video မြား
လောင်းကစားကြောင့် ဘဝပျက်ပြီး အိမ်တွေ ကားတွေ ပါသွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ခင်လှိုင်
ခင်ပွန်းသေတယ်ထင်ပြီး ကလေးနှစ်ယောက်ိုသတ် မိမိပါ ရေထဲ ခုန်ချခဲ့ပေမယ့် သူ့ခင်ပွန်းတကယ်သေတာ မဟုတ်တဲ့အခါ
တာဝန်ယူစိတ်နဲ့ ဆင်းကြည့်မိရာမှ စကေဘာ ၃ ချက်ဆင့်ထိုးခံခဲ့ရတဲ့ တပ်မတော်အရာရှိရဲ့ ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်
ဒီလိုမျိုး လူငယ်တွေ …များများ ပေါ်ထွက်လာမှ… မြန်မာနိုင်ငံကြီးက...
“သားဖြစ်သူကို ဘောလုံးအကယ်ဒမီမှာ …ယုံယုံကြည်ကြည် အပ်နှံထားခဲ့ပေယ့်...